भिडियो: केभिन स्पेसीले कहानी कथनको3तत्वहरू छलफल गर्दछ Martech Zone
भिडियो: केभिन स्पेसीले कहानी कथनको3तत्वहरू छलफल गर्दछ
मङ्गलबार, अक्टोबर 28, 2014 मङ्गलबार, अक्टोबर 28, 2014 Douglas Karr
स्टोरीटेलिंग भनेको सामग्री मार्केटिंग संसारमा सबै क्रोध हो। यो पनि छलफलको विषय थियो सामग्री मार्केटिंग विश्व २०१ 2014 जहाँ केभिन स्पेस्सीले मुख्य कथन गर्‍यो… कहानी सुनाउँदा। श्री स्पेसी महान कथा कथनको तीन तत्वहरूमा हिँडे। मैले मेरो आफ्नै टिप्पणी यहाँ थपेको छु - तपाईको मुख्य भाषणको भिडियो हेर्न सक्नुहुन्छ (जुन होसियारीपूर्वक शोषणकारीहरूको संग्रहलाई काट्न सम्पादन गरिएको थियो)।
द्वन्द्व - तपाईंको व्यवसाय केविन स्पेसी स्क्रिप्ट जत्तिकै रंगीन कुनै कुराको लागि समाधान नहुन सक्छ, तर त्यहाँ द्वन्दहरू छन् जुन तपाईं समाधान गर्न खोज्दै हुनुहुन्छ। तपाईं समस्याको समाधान हुनुहुन्छ र हरेक समस्या द्वन्द्व हो। यो दक्षताको पहिचान, खुशीको पछि लाग्ने, सूचनाको सही विश्लेषणको विवाद हो। आफ्नो दर्शकहरु संग संघर्ष साझा गर्नुहोस्!
प्रामाणिकता - सामाजिक मिडिया मार्केटिंग दुनिया मा कहानी कथन को प्रामाणिकता को एक प्रमुख टुक्रा हो। तपाईसँग प्रयोग केसहरू, प्रशस्तिपत्रहरू, कर्मचारीहरू, र - निश्चित रूपमा तपाईको आफ्नै व्यक्तित्व कहानी प्रदान गर्ने अवसर प्रदान गर्ने र यसलाई राम्रोसँग बताउने मौका छ। क्यारेक्टरहरू बिना कहिनीहरू कथाहरू ... त्यसका बारे सोच्नुहोस्!
दर्शक - तपाईं कहाँ पुग्दै हुनुहुन्छ, तिनीहरू कहाँ छन्, र तपाईं उनीहरू कहाँ पुग्दै हुनुहुन्छ? के तपाईं उनीहरूले उपभोग गर्ने माध्यमहरूमा तपाईंको कथा सुनाउँदै हुनुहुन्छ? के तपाईं बारम्बार आफ्नो कथा बताउँदै हुनुहुन्छ? के तपाईं भावनात्मक हिसाबले उनीहरूसँग जडान हुने किसिमले कथा रचना गर्दै हुनुहुन्छ? तपाइँको दर्शकलाई चिन्नुले तपाइँलाई तपाइँको कथालाई ठीक-धुनमा मद्दत गर्दछ!
सायद सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा श्री स्पेसीले बन्द गर्दा भनेका थिए, यो थियो:
र सम्झनुहोस् ... यो जोखिम लिनेहरूलाई पुरस्कृत गरिन्छ।
कथाहरू जो बाहिर उभिन्छन् भनेर फरक हुन्छन्, ध्यान खिच्ने व्यक्तित्वहरु, भावनात्मक हिसाबले जोड्ने, साझेदारी गर्न योग्य हुनेहरू। त्यो कथा जुन तपाईं निर्माण गर्दै हुनुहुन्छ?
टैग: सामग्री बजार दुनियाकेभिन खाली ठाउँकिनोटकहानी
जस्तै एप्पल र चीज, ईमेल र सोशल मीडिया मार्केटिंग